समूहकै वर्चस्व- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
नेपाली फिल्ममा केही वर्षयता ॅटिम–वर्क’ मा काम गर्नेहरू हाबी भइरहेका छन् । बजारमा पनि उनीहरूकै फिल्मले बढी व्यापार गरिरहेको छ ।
कार्तिक १, २०७६ सुशील पौडेल
२०६८ साल पुसमा एउटा फिल्म रिलिज हुँदै थियो । कलाकारदेखि निर्देशक सबै नयाँ थिए । हिरोवाद हाबी भइरहेको त्यस समय नयाँ टिमको कामप्रति कमैको चासो थियो । आखिर नपत्याउने खोलाले बगायो । फिल्म थियो– लुट । त्यही फिल्मबाट कसैले वास्ता नगरेका सौगात मल्ल, दयाहाङ राईजस्ता कलाकार रातारात हिट भए । भर्खरै फिल्म कलेज पढेर आएका अल्लारे ठिटो निश्चल बस्नेत एकाएक सेलेब्रिटी निर्देशक बने । सानो बजेटमा नयाँ टिमले बनाएको लुट किन चल्यो ? धेरैले धेरै अर्थ लगाए ।
निश्चल लुट चल्नुको पहिलो श्रेय टिमलाई दिन्छन् । भन्छन्, ‘त्यो टिमअप नभएको भए लुट त्यत्तिको बन्दैनथ्यो ।’ उनले टिमका सबै सदस्यको व्यक्तिगत प्रयासकै उपज फिल्म गतिलो बनेको जिकिर गर्दै थपे, ‘निर्देशकका रूपमा त मैले सबैलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स मात्रै गरेको हुँ ।’ तिनै निश्चल ठीक पाँच वर्षपछि सोही टिमसहित लुटको सिक्वेलसहित देखापरे । तर पनि फिल्म अपेक्षाकृत बन्न सकेन । चल्न सकेन । किन त ? निश्चल समीक्षात्मक बने, ‘सबैले फिल्म बनाउँदा टिमअप त गर्छन् नै । तर कस्तो टिम भन्ने कुराले फरक पार्दो रहेछ । त्यही टिम भए पनि हाम्रो काम लुटको बेलाजस्तो भएन । राम्रो फिल्म बन्न टिमको एक्स्ट्रा इफोर्टले अर्थ राख्दो रहेछ ।’ सिक्वेल बनाउँदा पैसादेखि चर्चा सबै भए पनि टिम सदस्यसँग राम्रो तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको उनको गुनासो छ ।
‘लुट’ को सफलतापछि धेरै फिल्मकर्मीले त्यस्तै फिल्म बनाउन कोसिस गरे । छाडा संवाद हाबी त्यस्ता फिल्म चल्ने कुरै थिएन । चलेनन् । फेरि उनै निश्चलले नयाँ टिम बनाएर अर्को फिल्म ल्याए, ‘कबड्डी’ । निश्चल निर्माणमा बसे । रामबाबु गुरुङले निर्देशनको बागडोर सम्हाले । निश्चलले ‘कबड्डी’ को निर्माणमा टिमलाई समेत हिस्सेदार बनाए ।
सबैमा फिल्मप्रतिको अपनत्वले ‘कबड्डी’ लाई राम्रो बनायो । हिमाली भेगको थकाली समुदायको कथालाई मेनस्ट्रिम फिल्मका दर्शकले पनि रुचाइदिए । ‘एउटा राम्रो फिल्म बनाउन टिम चाहिन्छ । टिममा पैसाभन्दा सोचले बढी महत्त्व राख्छ,’ रामबाबु भन्छन्, ‘फिल्म देख्ने आँखाहरूबीचको तारतम्य मिल्नैपर्छ । सोच मिलेन भने टिम भए पनि फुट्छ ।’ टेलिभिजनको पर्दामा कमेडी सिरियल छ्यापछ्याप्ती थिए । चलेकै थिए । ‘तीतो सत्य’ का दीपकराज गिरीले फिल्म बनाउने भए । उनले फिल्म मात्रै बनाएनन्, त्यसताक पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका हास्य कलाकारलाई एक ठाउँमा ल्याएर आफ्नै टिम पनि बनाए । छ वर्षअघि ‘छ एकान छ’ बनाएको उक्त टिमले अनवरत बर्सेनि फिल्महरू बनाइरहेको छ । सफलता चाख्दै आएको छ । दीपकको समूहको फिल्म चल्नुलाई धेरैले कमेडी रुचाइएको अड्कल काट्दै यस्तै प्रकृतिका फिल्म बनाउने लहड यतिबेला चलिरहेको छ । रामबाबु भने कमेडी चल्यो भन्ने बुझाइ गलत मान्छन् । भन्छन्, ‘कमेडी फिल्म मात्रै चलेको पनि हैन र कमेडी नभएको फिल्म चल्दै नचलेको पनि हैन ।’ दीपकराज आफ्ना फिल्म चल्नुको कडी टिमलाई नै दिन्छन् । ‘पहिलो कडी हाम्रो टिमवर्क नै हो’ दीपकले टिमकै कारण पटकथा र संवाद चुस्त र दर्शकअनुकूल बनाउन सकिएको ठान्छन् । राम्रो फिल्म बनाउने चक्करमा कला थोपर्नुमा पनि दोष देख्ने दीपक कला र मनोरञ्जनको सही तालमेल मिलाउन सकेमा मात्रै दर्शकले रुचाउने धारणा राख्छन् ।
‘हाम्रोमा समूहगत मिहिनेत छ । एक जना क्याप्टेन भए पनि उसलाई मात्रै सबै कुरा निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । सल्लाह गर्दै फिल्म बनाउँछौं । झगडा गर्छौं, मुख रातो पनि बनाउँछौं तर प्रेमपूर्वक,’ उनले टिममा हरेक सदस्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै थपे, ‘हाम्रो टिममा कमेडीको पाटो माग्ने बूढा (केदार घिमिरे) को काँधमा छ । पटकथा मेरो, प्राविधिक पाटो दीपा (निरौला) जी र जितु नेपाल जी सबै पाटोमा काम गर्नुहुन्छ ।’
निर्देशनमा ठूलो आशा देखाएका भए पनि निश्चलले तीन वर्षयता फिल्म निर्देशन गर्न सकेका छैनन् । गतिलो टिमअप हुन नसकेकैले फिल्म बनाइहाल्न आँट्न नसकेको स्वयं निश्चल स्विकार्छन् । यतिबेला उनीसँग न ‘लुट’ को टिम छ, न त ‘कबड्डी’ मा नै उनी छन् । ‘सुरुमा जुन टिम बनाएर काम गरियो, सफल पनि भयौं । त्यसपछि सबैजना आ–आफ्नो काममा गए । त्यसपछि अर्को नयाँ टिममा जोडिएर काम गरें । उहाँहरू पनि स्थापित हुनुभयो । फेरि आ–आफ्ना काममा लाग्नुभयो ।
मैले समूह फेरिरहेको छु, टिमवर्क त्यही खोजिरहेको छु,’ निश्चलले सुनाए ।
निश्चल फिल्म राम्रो बन्न निर्देशकको सोचअनुरूप चल्न सक्ने टिमको खाँचो देख्छन् । भन्छन्, ‘खासमा निर्देशकले फिल्म सोच्ने हो । तर उसको सोचअनुसार हरेक पक्षका अरू सदस्यले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अरू सदस्य अब्बल हुनुपर्छ । निर्देशकले आफ्नो सोचअनुरूप हरेकबाट काम आएको छ वा छैन हेर्छ । यही प्रक्रियाबाट बनेका फिल्म राम्रो हुन्छ ।’
उनले फिल्म संघर्षको चरणमा नै राम्रो बन्ने गरेका सुनाउँछन् । उनले त्यो बेला फिल्मभन्दा बाहेक अरूमा ध्यान नहुने तर स्थापित हुँदै जान थालेपछि बिजनेस गर्न थाल्ने टिप्पणी गरे । ‘अहिले हामी फिल्म बनाएर बिजनेस गरिरहेका छौं । मैले बनाएको फिल्मले यति बिजनेस त गर्नैपर्छ भन्ने सोच आइसक्यो । हामी व्यापारी भइसक्यौं । अहिले प्राय: चलेका फिल्मका निर्देशक नै निर्माता छन्,’ उनले ‘लुट २’ को अनुभवसमेत जोडेर भने, ‘म स्क्रिप्ट फाइनल भइसकेपछि टिमका सबैसँग बसेर त्यसको विश्लेषण गर्ने गर्छु । तर त्यो मौका ‘लुट २’ मा पाइनँ । उत्तरपुस्तिकामा नै गलत लेखिएको छ भने नतिजा राम्रो आउनेवाला त छैन । पाइला नै गलत चालिसकेपछि सही गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने आशा गर्नु नै बेकार हो ।’
रामबाबुलाई अहिलेका अधिकांश दर्शकले ब्रान्ड र टिम हेर्न थालेको मान्छन् । भन्छन्, ‘यो टिमले बनाएको वा ब्यानरले बनाएको, यो कलाकार भएको फिल्म हेर्न लायक हुन्छ भन्ने सोच दर्शकमा आउन थालेको छ ।’ दीपक टिमवर्क गतिलो भएमा गतिलो पटकथामा गतिलो काम हुने र राम्रो फिल्म बन्ने ठान्दै भन्छन्, ‘कसैले मीठो भात पकाएको छ भने हामी केवल कुन चामल हो भनेर मात्रै दौडिने कि त्यसलाई कसरी पकाएर मीठो भएको होला भनेर पाककलातर्फ पनि ध्यान दिने ?’
छ एकान छ ( सन् २०१४)
निर्देशन : दीनेश डिसी
निर्माता, पटकथा : दीपकराज गिरी
कलाकार : दीपकराज गिरी, शिवहरि पौडेल, जितु नेपाल, केदार घिमिरे
वडा नं. ६ (२०१५)
निर्देशन : उज्ज्वल घिमिरे
कलाकार : दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, केदार घिमिरे
छक्का पन्जा सिरिज (२०१६, ०१७, ०१८)
निर्माता : दीपकराज गिरी
निर्देशन : दीपाश्री निरौला
कलाकार : दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे
छ माया छपक्कै (२०१९)
निर्देशन : दीपेन्द्र लामा
कलाकार : दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, केकी अधिकारी
लुट सिरिज (२०१२ र ०१५)
निर्देशन, पटकथा : निश्चल बस्नेत
कलाकार : सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, कर्मा, ऋचा शर्मा
निर्देशन : रामबाबु गुरुङ
निर्माता, कलाकार : निश्चल बस्नेत
कलाकार : दयाहाङ राई, विजय बराल, बुद्धि तामाङ, रिश्मा गुरुङ
टलकजंग भर्सेस टुल्के (२०१४)
निर्देशन : निश्चल बस्नेत
पटकथा : निश्चल बस्नेत र खगेन्द्र लामिछाने
कलाकार : खगेन्द्र लामिछाने, दयाहाङ राई, ऋचा शर्मा
कबड्डी सिरिज (२०१३, ०१५, ०१९)
निर्देशन, पटकथा : रामबाबु गुरुङ
कलाकार : दयाहाङ राई, माओत्से गुरुङ, मेनुका प्रधान, प्रियंका कार्की
पुरानो डुंगा (२०१६)
कलाकार : दयाहाङ राई, गौरव पहारी, मेनुका प्रधान, माओत्से गुरुङ प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ११:४२
फिल्म समीक्षा : “छक्का पन्जा” कै परिष्कृत रूप
आश्विन २५, २०७६ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने पानीका लागि हुन्छ भनिन्छ । पानीको संकट विश्वव्यापी रूपमा बढिरहँदा जलस्रोतको धनी देश मानिने नेपालमा यसको असर कत्तिको होला ? झिसमिसेमा नै गाग्री बोकेर घण्टौं टाढाको पँधेरामा जान बाध्य गाउँलेलाई मात्र हैन, दशकौंदेखि मेलम्चीको पानी कुरेर बसिरहेका काठमाडौंवासीले समेत पानी संकटको पीडा भोग्दै आइरहेका छन् ।
कञ्चनपुर गोदावरी गाविसको घडेरी गाउँका बासिन्दालाई पिउने पानी अभावको पीडा उस्तै छ । २०४५ सालको भुइँचालोले मुहान सुकाएपछि गाउँले काकाकुल बनेका छन् । हरेक चुनावमा यही गाउँको मत उम्मेदवार जिताउनका लागि निर्णायक त बन्दै आएको छ । गाउँलेले जनप्रतिनिधि चुनाएर पठाइरहे पनि पानी ल्याउन भने सकिरहेका छैनन् । पानीकै समस्या विकराल बन्दै जाँदा घडेरी गाउँमा बिहेबारी गरेर छोरीचेली पठाउन कोही तयार छैनन् । युवाहरू छिप्पिसक्दा पनि घरजम बसाउन पाइरहेका छैनन् ।
उमेरले ४२ पार भइसकेको बीपी पौडेल (दीपक) को हालत पनि उही हो । बूढी आमा बुहारी आउली र हातेसारो होला भन्ने आशामा छिन् । तर बीपीको उद्देश्य घरमा नानी भित्र्याउनुअघि गाउँमा पानी ल्याउन चाहन्छ । अझ उसको बुबा (प्रकाश) जो विगतमा सशस्त्र आन्दोलनसमेत गरेर आएको एक निष्ठावान् क्रान्तिकारी कार्यकर्ता, छोरालाई घरजममा भन्दा राजनीतिमा लाग्न र आफ्नो विरासत धान्न स्कुलिङ गरिरहन्छ । पढाइमा अब्बल छँदाछँदै पनि बीपी पार्टीको झोला बोकेर राजनीतिकै आडमा गाउँमा पानी ल्याउने सपना साँचिरहेको छ । यही कथाव्यथामा आधारित छ, फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ ।
दीपेन्द्र लामाले आफ्नै कथामा निर्देशन गरेको उक्त फिल्म शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा छ । लामाको कप्तानीमा जोडिएका छन्, यसअघि ‘छक्का पन्जा’ सिरिजबाट मनग्गे दर्शक कमाइसकेको दीपक–दीपासहितको टिम । हास्यप्रधान फिल्मबाट आफूलाई स्थापित गराइसकेका दीपक–दीपा यतिबेला ‘छ माया छपक्कै’ मार्फत् सामाजिक मुद्दामा अझ बढी केन्द्रीकृत भएका छन् । फिल्म पानीको दु:ख, राजनीतिक वितृष्णा र माया मोहमा अन्तरसम्बन्धित छ ।
पानीमाथिको राजनीतिमा विश्वमा धेरै फिल्म बनेका छन् । सन् १९२१ मै ल्यामबर्ट हिलयरको ‘थ्री वर्ड ब्रान्ड’ होस् वा रोबर्ट ब्राटबरीको सन् १९३३ को ‘राइडर्स अफ डेस्टिनी’ । अथवा, जोसेफ कानको सन् १९३६ को ‘किङ अफ द पिकस’, डिक क्लेमेन्टको ‘वाटर’ सबै फिल्मको केन्द्रीय द्वन्द्व पानीमा नै केन्द्रित छन् । पानी संकट र यसमाथिको राजनीति नयाँ पनि हैन र पुरानो भएको पनि छैन । सन् २०१० मै द हग्स ब्रदर्सले बनाएको फिल्म ‘द बुक अफ इली’ को मुख्य कथा पनि पानीमाथिको स्वामित्व लडाइँलाई नै लिएर छ । ‘क्वान्टम अफ सोलेस’ वा ‘ब्याटम्यान बिगिन्स’ ले पनि कतै न कतै पानीकै कथालाई उठाएको पाइन्छ । नेपालमा भने बलिउडको धङधङीबाट माथि उठेर फिल्ममा बल्ल सामाजिक मुद्दा उठ्न थालेका छन् । ‘छ माया छपक्कै’ पछिल्लो उदाहरण हो ।
फिल्मले घडेरी गाउँको विशेष समस्यालाई समग्र देशको राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्यमा सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । कम्युनिस्ट राजनीतिलाई नै मूल कर्म बनाएर दत्तचित्त लागेको एक बाबु, छोरालाई पनि क्रान्तिकारी बनाउन चाहन्छ । उता, छिमेकी टोड्के गाउँसँग राजनीतिक दुश्मनी चर्को छ । तर त्यही गाउँकी अध्यक्षकी छोरी जल (केकी) बीपीको जीवनमा मायाको अर्को युद्ध लिएर छिर्छे । बाबुले पानीका लागि राजनीतिको सहारा लिइरहँदा बीपीको उद्देश्य पनि गाउँमा पानी ल्याउने नै छ तर यसका लागि घृणा र द्वन्द्वको सट्टा छिमेकीसँग प्रेमको हतियार प्रयोग गर्छ ।
‘छक्का पन्जा’ सिरिजमा पनि कहिले वैदेशिक रोजगारी त कहिले डिपेन्डेन्ट भिसामा बिदेसिनेका कथा नभनिएका हैनन् । तर ती फिल्मको हास्य प्रस्तुतिको ओझेलमा परे । अथवा, ती फिल्म विषयप्रधान भन्दा हास्यप्रधान भइदिए । यस सिरिजका अधिकांश दर्शकले पनि ‘छक्का पन्जा’ लाई पनि यसैगरी बुझ्दै आएका छन् । तर त्यही बुझाइमा ‘छ माया छपक्कै’ हेर्न गएमा हाँसोको पारो त्यही तहमा नपाउन सक्छन् । सोझै भन्दा, ‘घामपानी’ र ‘गोपी’ निर्देशन गरिसकेका दीपेन्द्रको प्रवेशको असर पनि हुन सक्छ, यसपटक जबरजस्ती हसाउनकै लागि अनुप्रास मिलाइएका र टुक्का जोडिएका संवादको उतिसारो प्रयोग गरिएको छैन । उसो त पटकथा दीपकले नै तयार पारेका हुन् । यस अर्थमा, दीपक समूहले पनि आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लगेको छनक पाइन्छ ।
फिल्मले राजनीतिलाई पूर्णत: नकारात्मक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्छ । दीपेन्द्र निर्देशित फिल्मले गाउँमा चलिरहेको दलीय राजनीतिको बदख्वाइँ गर्दै गाउँ विकासमा दलको भर पर्न नहुने सन्देश दिन्छ । जानेर वा नजानेरै फिल्मले एक दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षपोषण गरेको भान हुन्छ । अर्कोतर्फ, ‘छक्का पन्जा’ सिरिजमा महिलामाथि कटाक्ष गरेको भन्दै चर्को विरोध झेल्दै आएका दीपक–दीपा समूहले यसपटक ‘छ माया छपक्कै’ मा सायद त्यसको सामना गर्नुपर्ने छैन । बरु धेरथोर महिला पात्रलाई सकारात्मक रूपमै उभ्याएका छन् ।
सामाजिक र सामयिक कथा उठान गरेको फिल्मले पटकथाको मूल द्वन्द्वमा पानी संकटलाई त प्रस्तुत गरिएको छ नै, द्वन्द्वलाई चर्काउने सहायक कथाहरूलाई मजबुत बनाउन समय खर्चिएको छैन । बीपीकै दलबाट बारम्बार नेता चुनिएर गएपनि घडेरी गाउँको पानी समस्याप्रतिको उसको उदासिनता र चुनावमा सोही गाउँका मतदाताको अहंभूमिकाबीचको रस्साकसीलाई सतहमा मात्रै उठाएर मायामोहको चक्करमा बढी ढल्कन पुगेको छ । फिल्मका कतिपय दृश्य ‘क्लिसे’ र पात्रहरू फजुल लाग्छन् । बीपीका जँड्याहा काका, जलका दाजु, बुबा, प्रवीण (जितु) र उसकी प्रेमिकाको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन सक्ने थियो ।
‘छ माया छपक्कै’ दीपक–दीपाको ‘छक्का पन्जा’ सिरिजको परिष्कृत रूप हो । तर अझै पनि यसका कलाकार दीपक, जितु वा केदारले आफ्ना चरित्र चित्रणमा नयाँपन दिन सकिरहेका छैनन् । गीत, संगीत फिल्मको धारअनुकूल बन्न र ‘प्लेसिङ’ उचित हुन सकेको छैन ।
छ माया छपक्कै
निर्देशक :दीपेन्द्र लामा
कलाकार :दीपकराज गिरी, केकी अधिकारी, प्रकाश घिमिरे, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, सुपुष्पा भट्ट, रमा
थपलिया, अनुराग कुँवर, सविन बाँस्तोला, शिशिर वाङ्देल
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ ०९:४४